लोडसेडिङ भएको खेलमा मुम्बईले पञ्जाबलाई दियो १८७ रनको लक्ष्य , जित कस्को ? |
लोडसेडिङ भएको खेलमा मुम्बईले पञ्जाबलाई दियो १८७ रनको लक्ष्य , जित कस्को ?
२०७५, २ जेष्ठ बुधबार २२:३३ May 16, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । अाईपिएलमा अहिले भईरहेको खेलमा मुम्बईले पञ्जाबसामु १८७ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । मुम्बईको घरेलु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मुम्बई ईन्डियन्सले निर्धारित २० अोभरमा ८ विकेट गुमाएर १८६ रन बनायो । मुम्बईको लागि किरन पोलार्डले सर्वाधिक ५० रन बनाए । २३ बल खेलेका उनले ३ छक्का र ५ चौका प्रहार गरे । त्यस्तै कुनाल पाण्डेले ३२ सुर्यकुमार यादवले २७ र ईशान किशनले २० रनको योगदान गरे ।
बलिङ तर्फ किङ्स ईलाभेन पञ्जाबको लागि एण्ड्री टाइले ४ विकेट लिए । ४ अोभर बलिङ गरेका उनले मात्र १६ रन दिए । त्यस्तै अार अश्विनले २ तथा स्टईनिस र अनकित राजपुतले समान १/१ विकेट लिए । यो खेलमा लाईट गएपछि लगभग १५ मिनेट खेल रोकिएको थियोे । तपाईंको बिचारमा यो खेल कसले जित्ला ? कमेन्ट गर्नु होला ।